House For Sale Kalaw - 71 Homes for Sale house for sale kalaw - Cari Homes
We have 71 ads for keyword house for sale kalaw
အိမ်ငှားရန်ရှိသည် House for rent
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့။ တစ်လ ၁ သိန်း ဆိုင်ခန်း ၂ခန်းအပါအ၀င် ...
27 Aug 2020 - imyanmarhouse.com
ခြံအကျယ် ပေ (65x144) 1RC အိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
-လိပ်စာ : ကလောမြို့ လေဆိပ်လမ်းဟောင်း ၊ ဟဲဟိုးလေဆိပ်အနီး ၊ဦးလွင်မိုး ...
Kalaw, Housing, Kalaw Haven
လိပ်စာ - ကလောမြို့ ၊ ပင်မကုန်း ၊ နှီးဘုရားအနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ...
Hill Top Villa Residence
- ကလောမြို့ Hill Top Villa Hotel နှင့်တစ်စပ်တည်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ - မြေအကျယ်အ၀န်း 2496 ...
သိန်း ၇၀၀ ညှိနှိုင်း ၁ ဧကအား သိန်း ၇၀၀ နှုန်းဖြစ်ပြီး ၄ ဧက ရှိပါသည်။ ပုံစံ ၇ ...
-လိပ်စာ : ရပ်ကွက်ကြီး (3)၊ ကလောမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။ -ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ...
အေးခမျြးသော ‌ဒသေ ကလောမွို့လေးတှငျ နထေိုငျလိုသူမြားအတှကျ အိမျနှငျ့ခွံလေးရောငျးမညျ
အေးအေးခမျြးခမျြးနထေိုငျနိုငျပွီး ကျောဖီဆိုငျလေး ...
An Interesting Yard From PinMarGone For Sale
650 lakh negotiate price 100'×100' Land record form 105 No confusion There are roads to the yard. Easy available for both water and electricity appliance. The view is very pleasant . Fresh air ...
16 Jul 2020 - imyanmarhouse.com
House With Compound With Pine Tree Surrounded For Sale
Myetyeinn, Quarter 7, Kalaw 1200 lakh negotiate price land record form 105 Two storey R.C building with another one storey R,C building With water and electricity included No confusion Close to ...
ရပ်ကွက် ၇ မှ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ခြံကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်
ရပ်ကွက် ၇၊ ကလောမြို့။ သိန်း ၆၀၀ ပါးပါးညှိနှိုင်း ရေစုံ၊ မီးစုံ ရှိပြီး ...
Sell at very good location with cheaper price
House - For Sale - Bedrooms:5- Bathrooms: 1
Located at 10 Quarter, Gyo-Pyay-Man-Pyay Pagoda Road (downtown area of Kalaw city which is very close with Police Station, Court, Garden, Clock Tower,etc). Very beautiful area Area around 0.6 acres ...
အမှတ် ၁ ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်ကြား၊ ကလောမြို့။ သိန်း ၈၀၀ ညှိနှိုင်း ပေ ၈၀×၁၀၀ ...
Tourism Area တစ်ခုအနေဖြင့်ထင်ရှားပြီး အေးချမ်းဆိပ်ငြိမ်သော ကလောမြို့ရှိ ...
နေ‌ရာကောငျး အိမျလှလှလေးတဈလုံး နဲ့ မွဧေကကယျြ ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျ ...
ကလောမွို့ ရပျကှပျ (၉) မကျြရဲအငျး အနောကျ ပုံစံ၁၀၅ ခွံ ပေ 50'×90' အိမျ ပေ 30'×36' ...
The Land With Nice View Myinka, Kalaw
450 Lakh negotiate price land record form71.5 Acre No confusion Quiet, Peaceful with fresh air throughout the year. No need to adjustment of land. It is only7minutes drive to Union Road and only ...
Two Storey House Near Golf Course For Sale
Pinmargone, Quarter 8, Kalaw 800 Lakh negotiate price 47'×75' land record form 105 It is close to the junction of the pagoda and is in front of the golf course. The ground floor of the house is the ...
home for sale kalaw
house for sale myothit
house for sale myawaddy